Duqeymo la'aan, maxay uga dhigan tahay Al-Shabaab? | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Safiirkii hore ee Mareykanka Stephen Schwartz, ayaa sheegay in hadii aan jirin duqeymaha Mareykanka ay Al-Shabaab noqonayso khatar weyn oo aan waxba laga qabin karin, islamarkaana halis galisa amaanka Soomaaliya iyo midka gobolka Geeska Afrika.
Wuxuu u sheegay VOA in duqeymaha cirka ay wiiqeen awooddii badnayd ee Kooxda, oo hadda dib u gurasho sameynaysa iyadoo ay hogaamiyeyaasheeda ay noqdeen kuwa diyaaradaha drones-ka ugaarsi ku hayaan, oo ku dhuumaaleysanaya keymaha/duurka.
"Hadii aan dhicin wax duqeyn ah mudo bilooyin ah, waxaan u maleynayaa in Al-Shabaab ay heli lahayd fursad fiican iyo nafis oo ay isku abaabusho, kuna diyaariso weeraro waaweyn, waxayna sameyn lahayd dhaq-dhaqaaqyo, tabararo iyo shirqoolo ka dhan ah amniga Soomaaliya iyo midka Gobolka Geeska Afrika," ayuu yiri Schwartz.
Schwartz ayaa soo noqday danjiraha Mareykanka u fadhiya Soomaaliya intii u dhaxaysay 2016 illaa 2017, waana mas'uul xog badan ka haya arrimaha la dagaalanka argagaxisadda Soomaaliya, oo Washington dhaqaale badan ku bixisa.
Hadalkiisa wuxuu imaanaya xili labo duqeyn ay Ciidamada Mareykanka ka fuliyeen Todobaadkii tagey gobolka Mudug, oo uu ka socdo howlgal ballaaran oo Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ay iska kaashanayaan.
Jimcaddii shalay ayee aheyd markii Wasaaradda Amniga Galmudug ay sheegtay in diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Mareykanka, ay duqeyn la beegsaday xarumo ay Kooxda Al-Shabaab ku leeyihiin degaanno u dhexeeya Qeycad iyo Hareeri-dheere, oo dhaca gobolka Mudug.
“Laba gantaal oo kuwa diyaaradaha laga soo rido ah ayaa lagu duqeeyey saldhig kale oo kooxda Alshabaab ay ku lahaayeen Qaycad iyo Hareeri dheere dhexdooda, waxaana hadda horey u galay ciidamada qaranka iyo kuwa Galmudug”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Galmudug.
Afar maalin ka hor ayay ahayd markii Mareykanku sidaan oo kale, duqeeyay fariisimo ay Kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka, taas oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Galmudug, u sahashay in ay la wareegaan gacan ku heynta degaanno hor leh.
Biden oo sii wada dagaalkii Trump